February 24, 2015 – democracy for burma
On February 24, 2015 February 25, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, china, KOKANG, MYANMARLeaveacomment
update 25/2/ ကြက်ခြေနီ ကားတွေ အပစ်ခံနေရတဲ့ နေရာ ကို အတိ အကျ သိတဲ့ လူရှိလား ။ ဖုန်းကြားရှင် အဖွဲ့ က မဟုတ်ဖူး ငြင်းနေတယ် ။ လောက်ကိုင် ချင်းရွှေဟော် ကားလမ်းကနေပြီး ၃ မိုင် လမ်းရှောက်ရင် တရုပ်ပြည် နယ်စပ်ရောက်တယ် ။ ################ #လောက်ကိုင်-ကုန်ကြမ်း ကားလမ်းပေါ်ရှိ (၁၈)မိုင်လမ်းဆုံ အနီးတ၀ိုက်တွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များ ယာယီခြေကုပ်ယူထားသည့် စစ်ဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂)ရက်တွင် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၃)ရက်တွင် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များဆုတ်ခွာသည့် အဆိုပါတောင်ကုန်းများ ပတ်ဝန်းကျင်အား အသေးစိတ်နယ်မြေရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်မယ် ။ cr. Htay Tint
MOI ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များက ကုန်းကြမ်းမြို့ တပ်ရင်း ဌာနချုပ်နှင့်
!! #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #สมศักดิ์ #เจียมธีรสกุล #มีคำสั่ง #ไล่ออก #ไอ้หงอก
On February 24, 2015 February 24, 2015 By Burma Myanmar newsIn สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, ThailandLeaveacomment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำสั่ง ไล่ออก ไอ้หงอก สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล